Vahaolana jiro fanatrarana jiro sy mpanamboatra jiro famandrihana | Fandriana Huayi
Vahaolana Leading Lead Lead Lead
Fampiatoana ny vera
Hazavana momba ny maritrano
Vahaolana jiro momba ny hazavana
Vahaolana fametrahana jiro
Fahazavana fanairana jiro
Hazavana mahasalama ho an'ny fiainana tsara kokoa
Natsangana tamin'ny 1986, izay ao amin'ny tanàna Guzhen ao amin'ny tanànan'i Zhongshan, ilay "renivohitra" Sina "ao Shina.
Manokana amin'ny r&D, famokarana sy varotra ny vokatra hazavana sy ny vokatra hafa mifandraika
Lamba amin'ny alina
Famolavolana modely penguin.
Nitarika jiro famakiana
Famolavolana lamaody minimalist
Lamba fitaratra fitaratra kosmetika
Avant-Garde Modering Design
Huayi Live Stream
Ny marika malaza malaza hatramin'ny 1986, ny jiro Huayi dia misokatra malalaka mba hitarika ny indostrian'ny jiro amin'ny sehatra media isan-karazany. Na inona na inona feno anatiny& Ny vokatra jiro ivelany, na ny efitrano fandraisam-bahiny misy jiro 7-kintana, na mihoatra ny 2000sqm foibe orinasa orinasa, araho izahay, hanolotra anao fitsangatsanganana mahafinaritra hahafantarana momba an'i Huayi. Ny renirano mivantana isan-kerinandro dia hatao ao amin'ny Alibaba International sy ny mediam-pirenena hafa hanehoana efitrano huayi& Famintinana ny orinasa sy ny fahatongavan-tsarotra vaovao, haingon-trano& Vokatra jiro,Fahazavana ara-nofo indostrialy, hazavana maoderina, fomba maoderina, hazavana maoderina, hazavana fampiatoana fitaratra,Fahazavana namboarina, kalesy azo itokisana sy azo itokisana.
Raiso tsara ny sainao mitohy. Maro ny zavatra tsy ampoizina miandry anao ...
Kempinski Hotel Dubai mifandray amin'ny fivarotana lehibe any Emiras, ny efitrano fandraisam-bahiny misy haingon-trano mihaja dia misy fandroana marbra, fahitalavitra LCD lehibe sy efitrano fisakafoanana. Ny efitra sasany dia tsy afaka jerena ny Village Ski Dubai.
Hotely India-Le Méridien
Ny trano fandraisam-bahiny Le Méridien dia mampiharihary ny mpandeha saina liana sy mamorona amin'ny traikefa tsy ampoizina sy mahasarika atolotry ny toerana haleha. Miorina amin'ny vanim-potoana volamena amin'ny dia, Le Méridien dia mijanona ho toeram-pivorian'ny olona mankafy ny fahitana ireo tanjona manerantany Ny marika tsara indrindra eto an-tany miaraka amin'ny valisoa tsara kokoa
Tanànan'ny tsena India-Phoenix
High Street Phoenix, fantatra amin'ny anarana hoe Phoenix Mills, dia iray amin'ireo toeram-pivarotana lehibe indrindra any India, any Lower Parel, Mumbai. Ny velarany ambanin'ny tany dia 3 300 000 metatra toradroa. Ankoatry ny toeram-pivarotana lehibe, ny trano fandraisam-bahiny dia mampiantrano hotely kintana dimy, toerana marobe sy trano fivarotana ary tilikambo.
Hilton Astana, hotely manara-penitra ao anatin'ny trano fampirantiana EXPO-2017 futuristic. Ankafizo ny serivisy avo lenta raha eto ianao ary koa ny fampitaovana mampieritreritra toy ny spaoro ara-pahasalamana, bara tafo, foibe fanatanjahan-tena, dobo anaty trano, Executive Lounge ary toerana fanaovana kaonferansa marobe. Izy io dia ao anatin'ny munites afovoan-tanàna, birao orinasa, Governemanta departemanta sy maso ivoaran'i Kazakhstan, ary seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Astana.
Te hifandray aminay ve ianao?
Lazao anay fotsiny ny zavatra takinao, afaka manao mihoatra noho izay azonao eritreretina ianao